यस्ता छन् पेटमा जुका लाग्नबाट जाेगिने उपायहरू - ज्ञानविज्ञान
यो जुनसुकै उमेर समूहका मानिसलाई लाग्ने रोग हो । तर बिशेषगरी बच्चहरुलाई बढी लाग्ने भएकाले बच्चको आमाबाबुले बिशेष ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ ।
कसरी लाग्छ जुका ?
ब्यक्तिगत र वातावरणीय सरसफइ नभएमा यो रोग लाग्छ ।
जथाभाबी, जहाँ पायो त्यहीँ दिसा गर्ने गरेमा राम्ररी साबुन पानीले हात नधोएमा
काँचो खानेकुरा राम्ररी धोइपखाली गरी नखाएमा
जुत्ता नलगाइ नाङगो खाली खुट्टा हिँड्नाले यो रोग लाग्दछ ।
हेर्दा गडयौला जस्तो देखिने जुकाले खानामा पाइने पोषक तत्वहरुको उपयुक्त पोषणमा असर पारी शरीरमा पोषक तत्वहरुको कमी गराउँदछ । त्यसैले आफ्ना बच्चको हेरचाह गर्ने आमाबाबुले ब्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिएमा बच्चालाई जुकाको संक्रमण हुनबाट बचाउन सक्दछन् ।
त्यसैले बच्चाहरुको खाना बनाउनुअघि, स्तनपान गराउनुअघि, दिसा सफा गरिसकेपछि आमाबाबुले राम्ररी साबुनपानीले हात नधोएमा बच्चालाई जुका लाग्न सक्दछ ।
जुका परजिवी भएकोले मानिसले खाएको खानामा भएको पौष्टिक तत्व नास गरिदिन्छ र मानिसको आन्द्रामा बसेर हुर्किने र बच्ने गर्दछ । यसले मानिसको आन्द्राबाट पोषिलो खानाको साथै रगत समेत चुसेर आफ्नो जीवन निर्वाह गर्दछ ।
यसले हाम्रो शरीरको रगत चुस्ने भएकाले जुका लागेको मानिसमा कुपोषण तथा रगतको कमी जस्ता समस्याहरु पनि निम्त्याउँछ । जसको परिणमले बहुसंख्यक बालबालिकाहरुको शारीरिक तथा मानसिक बृद्धि र बिकासमा अबरोध पैदा भई मृत्युको मुखमा समेत ढकेल्छ ।
पेटमा कसरी पर्छ जुका ? यस्ता छन् कारण, लक्षण र बच्ने उपाय
सरसफाइको कमी, दूषित खानाले पेटमा परजीवीले प्रवेश गर्छ । धेरै बालबालिकाको पेटमा जुका पर्नुको कारण पनि यही हो । तर, कहिलेकाहीँ सरसफाइको अभावमा ठूलै मानिसको पेटमा पनि जुका पर्न सक्छ । त्यसैले जुका जोसुकैलाई पर्न सक्छ ।पेटमा विभिन्न प्रकारका जुका पर्छन् । जस्तो कि– राउन्ड वर्म, थ्रेडवर्म, टेपवर्म, पिनवर्म, हुकवर्म, जिआर्डिया आदि ।
जुकाहरू सानो आन्द्रामा बस्छन् । फर्टिलाइजेसन (गर्भाधान) गरेपछि पोथी जुकाले लाखौँको संख्यामा फुल पार्छन् । जुन फुल मानिसको दिसाबाट बाहिर आउँछ । दुईदेखि तीन सातासम्ममा यी फुल सक्रिय लार्भा बनिसक्छन् । मानिसले जुकाको फुल खाएपछि उसमा समस्या हुन्छ । जुका पेटभित्र पर्ने होइन, बाहिरी खानाको माध्यमबाट पेटसम्म पुग्ने हो ।
जुकाका फुल सानो आन्द्रामा विकसित हुन्छन् र गतिशील लार्भामा परिणत हुन्छन् । सानो आन्द्राको भित्तालाई छेडेर रगतको नलीमा पस्छन् र दाहिनेपट्टिको मुटुमा पुग्छन् । त्यसपछि पुनः फोक्सो हुँदै घाँटीमा आइपुग्छन् । त्यसपछि अन्ननली र अमासय हुँदै पुनः सानो आन्द्रामा पुग्छन् । यसरी जुकाको जीवनचक्र चलिरहन्छ ।
तारेको र भुटेको परिकारको सकेसम्म प्रयोग गर्नु हुँदैन ।
बासी खाना पनि खानु हुँदैन ।
बेसनबाट बनेका परिकार मिठाई, चकलेट, चिनी नखाँदा राम्रो हुन्छ ।
नङ टोक्ने, हात राम्रोसँग सफा नगरी खाने, भुइँमा झरेको टिपेर सफा नगरी खाने, सलादलाई नपखाली खाने गरे जुका पर्छ ।
त्यस्तै, नाक कोट्याउने, औँला मुखमा हालिराख्ने, माटो खाने, मासुलाई राम्रोसँग नपकाई खाने, बढी गुलियोको प्रयोग गर्ने बानीले पनि जुका पर्ने सम्भावना हुन्छ ।
वाकवाक लाग्नु, बान्ता हुनु
ज्वरो आउनु, खोकी लाग्नु
तौल घट्नु, दुब्लाउँदै जानु
अनुहार पहेंलो देखिनु
आँखा वरिपरि कालो घेरा हुनु
पेट ठूलो र कडा हुनु
निद्रामा दाँत किटकिटाउनु
ओछ्यानमा पिसाब गर्नु, पिसाब सेतो भएर जम्नु
जिउ भारी हुनु, हातखुट्टा चिसो हुनु
स–साना कुरामा रुनु कराउनु
– फोहोर तथा दूषित माटोमा खेल्दा बालबालिकाको हातमा जुकाको फुल टाँसिन्छ र पछि मुखमा औँला राख्दा भित्र जान्छ । त्यसैले घरमा बालबालिकालाई सफासुग्घर राख्ने गर्नुपर्छ ।
– खाना खानुअघि साबुन–पानीले हात राम्रोसँग धुने गर्नुपर्छ ।
– सकेसम्म भुइँमा झरेको खाना खानु हुँदैन । खाइहाले पनि राम्रोसँग सफा गर्नुपर्छ ।
– नियमित रूपमा हातको नङ काट्ने गर्नुपर्छ । ताकि नङमा फोहोर जम्मा हुन नपाओस् ।
– जहाँ पायो त्यहीँ दिसा–पिसाब गर्नुहुँदैन ।
– जहिले पनि पानीलाई उमालेर र फिल्टर गरेर मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ ।
– भान्छाकोठाको सफाइमा विशेष ध्यान पु¥याउनुपर्छ ।
– खाद्य तथा पेयपदार्थलाई झिँगाबाट बचाउनुपर्छ ।
– परिवारमा कसैलाई जुका परेमा सबैको उपचार गर्नुपर्छ ।
– पेट सफा राख्नुका साथै कब्जियत हुन दिनु हुँदैन ।
– जुका हेर्दा सामान्य लागे पनि कहिलेकाहीँ यसले घातक रोग निम्त्याउन सक्ने भएकाले यसबाट सबै सजग हुन आवश्यक छ ।
– समय–समयमा दिसाको परीक्षण गर्दा पनि यसबाट बच्न सकिन्छ ।
हाम्रो पेटमा भएको जुकालाई पन्छाउने घरेलु उपाएहरु
जब हाम्रो पेटमा किरा (जुका) पर्छ तब कयौँ किसिमका समस्याहरुको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । प्राय मान्छेलाई पेटमा जुका परेको लक्षण वा संकेत थाहा हुन्छ भने कतिपयलाई भने थाहा हुँदैन । पेटमा जुका पर्दा विभिन्न लक्षणहरु देखा पर्छन् । जस्तै एकदमै पेट दुख्ने, खाना नपच्ने, पखाला लाग्ने, खाना खाने बित्तिकै दिसा लाग्ने, दिसामा रगत देखिने, बान्ता हुने, ग्यास हुने वा शरीर सुन्निने, गुदद्वार चिलाउने र पाइल्स समेत हुने जस्ता लक्षणहरु देखा पर्छन् ।
१/२ केस्रा लसुनलाई पिसेर पेस्ट बनाउने । त्यसपछी यो पेस्टमा थोरै नुन मिसाएर सेवन गर्नुहोस् । यसले पेटको जुकालाई नष्ट पार्न मद्धत गर्दछ ।
गाजरलाई सानो सानो टुक्रामा काटी मिक्सीमा पिसेर यसको जुस बनाउने र यो जुस सेवन गर्ने । गाजरले पेटको जुकालाई मारेर बाहिर निकाल्न मद्धत गर्छ ।
Don't Miss it भाइरल ज्वराे के हाे ? कसरी बच्ने भाइरल ज्वराेबाट जान्नुहाेस्
Up Next यी खानेकुरा ​थाइराइडका रोगीले खानु हुदैन
जाडोयाममा हाम्राे शरीरमा पानीकाे अपुग हुनसक्छ, यसो गर्नुहोस्, स्वस्थ हुने निश्चित
चिसो सुरु हुनासाथै हाम्रो खानपानको मात्रा बढ्छ तर, पानी पिउने मात्रा भने घट्दै जान्छ । जाडाेमा पानी पिउन सबैलाइ मुस्किल…